जिदान किन रियल म्याड्रिड फर्किए ? | Hamro Khelkud
जिदान किन रियल म्याड्रिड फर्किए ?
एजेन्सी – सिजनको सुरुमै सुपरस्टार फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो र प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानको बर्हिगमनसँगै स्पेनिस महारथी रियल मड्रिडले निकै खराब प्रदर्शन गर्यो ।
रोनाल्डोको विकल्पमा क्लबले कुनैपनि स्तरीय खेलाडी अनुबन्ध सकेन । युवा र जुनियर खेलाडीको भर पर्दा रियलले यो सिजन कमजोर टिमसँग पनि लगातार हार बेहोर्न पुग्यो । यतिमात्र हैन रियलले आफ्नै मैदानमा लगातार हार बेहोर्यो । जिदानले छाडेपछि रियलले स्पेनका जुलियन लोपेटोगुईलाई हतारमा ल्यायो । तर, उनको प्रशिक्षणमा रियलले खराब प्रदर्शन गर्यो ।
लोपेटेगुईको खराब प्रदर्शनसँगै क्लबले उनलाई बर्खास्त गर्दै रियलले अन्तरिम प्रशिक्षकाको रुपमा सान्टियागो सोलारीलाई क्लबले नयाँ प्रशिक्षक बनायो । उनको प्रशिक्षणमा रियलले राम्रो सुरुवात गरेपछि क्लबले उनलाई २०२१ सम्मको पूर्णकालीन प्रशिक्षकमा नियुक्त गर्यो । तर, पछिल्लो एक सातामा दुई उपाधि (कोपा डेल रे र च्याम्पियन्स लिग) बाट बाहिरिएपछि सोलारी जागिर धरापमा परेको थियो ।
ला लिगामा शीर्षस्थानको बार्सिलोनासँगको अंक दुरी १२ मा रहेपछि रियलको ला लिगा जित्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । आइतबार राति रियल भालाडोलिडलाई ४–१ ले पराजित गरेपनि क्लबका अध्यक्ष फियोरेन्टिना पेरेज सन्तुष्ट हुन सकेनन् । सोलारीलाई बर्खास्त गर्दै रियलले क्लबका पुर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानलाई सोमबार प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
आखिर जिदान मड्रिडमा किन फर्किए
जिदान सन् २०१६ को जनवरीमा रियलको मुख्य प्रशिक्षक बनेका थिए । उनको प्रशिक्षणमा रियलले ९ उपाधि जितेको थियो । यतिमात्र हैन उनको प्रशिक्षणमा रियलले युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता युइएफए च्याम्पियन्स लिगको उपाधिमा ह्याट्रिक पुरा गर्यो । च्याम्पियन्स लिगको उपाधिमा ह्याट्रिक गरेसँगै जिदानले क्लबबाट टाढिने घोषणा गरे ।
जिदानको दोस्रो इनिङ्समा रियलले अब आफ्नो पुरानो लय समात्नेमा सबै विश्वस्त छन् । रियलका पदाधिकारीहरुले रियलको प्रशिक्षकमा जिदान नै उपयुक्त भएको बताएका छन् ।
जिदानको अट्याकिङ शैली
जिदानको प्रशिक्षणको सबैभन्दा ठुलो विशेषता एट्याकिङ र फ्रि–फ्लोइङ फुटबल हो । यसमा टिम काउन्टर एट्याक र गोल सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने गर्दछ ।
जिदानको यो रणनीतिमा एक फरवार्ड तैनाथ हुनेछन् । उनीहरुलाई विङ्सबाट अर्काे दुई खेलाडीको साथ दिनेछन् । अब जिदानको यो रणनीतिमा लुकास भाक्जेज र भिनिसियस जुनियरले फाइदा लिन सक्नेछन् ।
जिदानको ४–३–३ को शैलीले अघिल्ला वर्षहरुमा उच्च प्रदर्शन गर्दा युरोपमा तहल्का मच्चाएको थियो । जिदानको यो शैलीमा बेल, बेन्जेमा र क्रिस्टियानो रोनाल्डो (बीबीसी) को जोडी निकै छाएका थिए । यसपटक यो शैलीमा बेल र बेन्जेमा रहेपनि रोनाल्डो छैनन् । रियल रोनाल्डोको विकल्पमा अन्य स्तरीय खेलाडीको खोजीमा छ ।
२०१९ को समर ट्रान्सफर
रोनाल्डोले क्लब छाडेसँगै उनको विकल्पमा थुप्रै नामा चर्चामा आएपनि यो सिजन राम्रा खेलाडी अनुबन्ध गर्न सकेन । तर, यसपटक रियलले खेलाडी अनुबन्धमा मोटो रकम खर्चने छ । रियलको पहिलो रोजाईमा ब्राजिलियन नेयमार रहेको छन् । नेयमारलाई ३५० मिलियन पाउन्डको अफर गरिएको छ ।
रियलले अनुबन्ध गर्न खोजेको अर्का खेलाडी चेल्सी तथा बेल्जियमका प्लेमेकर इडेन हजार्ड पनि हो । हजार्ड जिदानको मनपर्ने खेलाडी हुन् । हजार्डलाई रियलले लगातार भित्र्याउने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको थिएन । ‘जिजु’ को फिर्तीसँगै रियलले हजार्डलाई अुनबन्ध गर्न सक्छ।
जिदानको आगमनसँगै साँच्चै रियलको भविष्यमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । २०२२ सम्म प्रशिक्षकको रूपमा क्लबमा रहँदा रियल म्याड्रिडले फेरि एक पटक युरोपेली वर्चस्वको लागि चुनौती दिन सक्दछ ।